TTSweet: အန်တီဆွိနှင့် ကားရောင်းခြင်းအတွေ့အကြုံ (၃)
အန်တီဆွိနှင့် ကားရောင်းခြင်းအတွေ့အကြုံ (၃)
အန်တီဆွိနှင့် ကားရောင်းခြင်းအတွေ့အကြုံ (၁)
အန်တီဆွိနှင့် ကားရောင်းခြင်းအတွေ့အကြုံ (၂) မှအဆက်
ခေါင်းစဉ်က "Lowest price in the market. Owner want to sell fast " ဆို ကြော်ငြာလိုက်တာခင်ဗျ။
မဆွိတီ ကြော်ငြာထားတဲ့ဈေးက ၄၂.၅ ဆိုတော့ သူများ ၄၄-၄၅ တွေကြားမှာ ကိုယ်က ဈေးအသက်သာဆုံး ဖြစ်နေတာကိုးဗျ။ ဈေးတွက်တာကတော့ ၃၉ နဲ့ ၄၅ ကို ကြားချ၊ စာရွက်စာတမ်းကြေး ၅၀၀ ပေါင်းလိုက်တာပါ။ ကြော်ငြာလိုက်တာ Sunday ည ၁၀နာရီလောက်ဖြစ်ပါတယ်။
Head quarter ထံ ပုံမှန် သတင်းပို့
မဆွိတီခုလိုကားရောင်းတဲ့ ကိစ္စကို တစ်ယောက်တည်း ထင်တိုင်းကျဲနေတာတော့ ဟုတ်ဘူးဗျ။ ညညကျရင် skype နဲ့ အော်ဇီက head quarter ကိုလဲ သတင်းပို့ရသေးတယ်။ head quarter ကလဲ ဟိုကနေ ဘာမှ လိုက်မလုပ်ပေးနိူင်လို့လား၊ မနိူင်ရွေ့ သည်းခံခြင်းလားတော့မသိ။ ဘာလုပ်လုပ် ဆွိသဘော။ ဆွိကြိုက်ရာလုပ်ဆိုတော့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ခွင့်တော့ ရနေတာပေါ့ဂျာ။
ုနောက်နေ့မနက် ရုံးမှာ အီးမေးလ်လေးဘာလေးဖတ် အိမ်ငှါးကိစ္စ လုပ်စရာရှိတာလေး လုပ်နေတယ်။ အဲဒီနေ့က ထူးထူးခြားခြား ရုံးမှာ အလုပ်ကလဲ ပါးလှတယ်။ ဘော့စ်အသစ်ကလဲ ရောက်ခါစဆိုတော့ သူ့ဟာသူ meeting တွေတက်၊ သင်တန်းတွေတက်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတယ်။ ကိုယ်တွေဖက် မလှည့်အားသေးဘူး။
ဒီလိုနဲ့ မနက် ၁၀နာရီလောက်လဲကျရော မဆွိတီရဲ့ Hand phone ဆီ ဖုန်းတွေ တဂွမ်ဂွမ်နဲ့ လာကြပါရောဗျာ။ SMS တွေကလဲ တတီတီနဲ့။ လက်မလည်အောင် ဖြေနေရတယ်။ ဘယ်သူတွေဖြစ်ရမလဲ။ ကားကြော်ငြာတာတွေ့ပြီး ကားဈေးမေးကြ၊ ဈေးဆစ်ကြ၊စုံစမ်းကြသူတွေ ပေါ့ဗျာ။ အဲလောက်လူတွေ ခေါ်မယ်လို့လဲ မမျှော်မှန်းထားပါဘူးဗျာ။ ကိုယ်ကလဲ ကိုယ်ပြောတာ ဘေးကလူတွေ ကြားမှာစိုးလို့ အခန်းဘေးက လူရှင်းတဲ့ Lab ခန်းထဲ ထ ထပြီး သွားပြောနေရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အဲ့ Lab ထဲမှာပဲ လူရှင်းတဲ့ ပြတင်းပေါက်လေးနားက ချောင်ထဲမှာ စတည်းချပြီင်္း လာသမျှ ဖုန်းတွေကို ဖြေနေရတော့တယ်။
Owner လေလော Dealer လော
အဲဒီမှာ တွေ့လိုက်တာက ကိုယ်ထင်တာနဲ့ တက်တက်စင်အောင်လွဲနေတာပါပဲ။ ခေါ်တဲ့သူတွေ အကုန်လုံး car dealer တွေ ဖြစ်နေပါရော။ ဈေးပိုရမလားလို့ owner (တိုက်ရိုက်ဝယ်သူကို ) ရောင်းချင်ပါတယ်ဆိုမှ ဘယ့်နှာ dealer တွေနဲ့ လာတွေ့နေရသလဲပေါ့။ တစ်ချို့ကလဲ ကိုယ့်ကို တောင် dealer လို့ထင်နေသေး ... ဟေးဟေး ။ ပထမတော့ မေးလိုက်လို့ dealer ဆိုရင် " ငါက owner ကိုတိုက်ရိုက်ရောင်းချင်တာ။ sorry ... " ဆို ဖုန်းချပစ်တာ။ နောက်တော့ ခေါ်သူအားလုံး dealer တွေချည်းဖြစ်နေတော့ မှ သဘောပေါက်တော့တယ်။ အဲဒီ car web page တွေကလဲ dealer တွေပဲ ၀ယ်ရောင်း ကျက်စားနေတဲ့ နေရာတွေဆိုတာ။ (တိုက်ရိုက်ဝယ်သူတွေက ကား show room တွေမှာသာ သေချာကြည့်ပြီး ရွေးဝယ်တာများမယ်ထင်ပါတယ်။)
Will you let your car go?
သူတို့ မေးလေ့ရှိတာက "I saw your advertisement in the carmart. Will you let your car go if I pay 40 -41 ...? " အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ အဲဒီမှာ ဆက်တိုက်ဆိုသလို လူ ၁၅ ယောက်၊ အယောက်၂၀လောက်က ခေါ်တာမှာ တစ်ချို့ကလဲ ၃၈-၃၉ ... တစ်ချို့ကလဲ ၄၁-၄၂ အထိတောင် ပေးကြတော့ အံ့သြသွားတယ်။ အရင်က ၃၈ ထက် ပိုမရတဲ့ကား၊ ခုကြော်ငြာလိုက်တော့ ၄၂ ပေးတဲ့သူတွေ မနည်းဘူးဗျ။ အဲဒီကျမှ အန်တီဆွိတို့ သဘောပေါက်တာ။ ငါခေါ်တဲ့ဈေးတော့ နည်းသွားပဟဆို ဈေးကို ပြင်မလို့အလုပ်၊ head quarter ကိုလဲ သတင်းအပို့မှာ head quarter ကြီးက ညည်းလောဘတွေ သိပ်ကြီးမနေနဲ့ ။ ကြော်ငြာတဲ့ဈေးရရင် ရောင်းလိုက်တော့ဆို command က လာပါလေရော။ သူကကိုယ့်ကို ခေါင်းထပ်မရှုပ်စေချင်တော့ဘူး။ ကားကိစ္စကို ပြတ်စေချင်နေပြီ။ မြန်မြန်ရောင်းရ အေးတာပဲ ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးပြောလာတယ်။ ကိုယ့်သဘောသာဆို ဈေးကွက် နဲ့ ပေါက်ဈေးကသိနေပြီဆိုတော့ ၄၄ လောက်နဲ့ ကြော်ငြာပြီး အသာစောင့်ရောင်းချင်တာ။ အချိန်ကလဲ ၃ပတ်လောက်ရှိသေးတယ်လေ။
ဒါနဲ့ ကြော်ငြာပြင်နေတုံးရှိသေး။ dealer တစ်ယောက်က ဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းမှာလဲတဲ့ မေးနေတယ်။ ကြော်ငြာထားတဲ့ ဈေးအတိုင်း မလျှော့တော့ဘူးဆိုတာ ကိုယ်က ပြောမိနေပြီ။ သူက ကြော်ငြာထားတာ ၄၂.၅ နော်။ သူအဲဒီဈေးပေးမယ်။ ခုပဲလာခဲ့တော့မယ်။ ဘယ်ကိုလာရမှာလဲ လိပ်စာကမေးနေပြီဆိုတော့ ... ကဲ ကိုယ်လဲ တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေပြီ၊ မထူးပါဘူးဆို အရင်က ၃၈ ဆိုတာထက် လေးထောင့်ငါးရာကျော်တောင် ပိုရနေပြီပဲဆို စိတ်ဒုံးဒုံးချ၊ ဈေးနှုံးပြင်တာကို ရပ်လိုက်ပြီး ရုံးလိပ်စာကို ပေးလိုက်တော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကိုယ်လဲအဲဒီ dealer ကို စောင့်နေတာ တော်တော်နဲ့ ပေါ်မလာဘူးဗျ။ ဒီကြားထဲ ခေါ်တဲ့သူတွေလဲ ရှိတယ်။ ကိ်ုယ်ကတော့ ကြော်ငြာတဲ့ဈေးရရင် ရောင်းမယ်ချည်းပြောလိုက်တာပဲ။ နောက် နေ့လည် ၁၂ နာရီ ထမင်းစားချိန်လောက်ကျတော့ SMS ၀င်လာတယ် on the way ဖြစ်နေပြီတဲ့ ။ လိပ်စာကို SMS ပို့ပေးပါတဲ့ဆို ပို့ပေးလိုက်တယ်ဗျ။
Car dealer (သို့ )မစ်စတာ ဂမ်း
၁၂နာရီ ခွဲလောက်ကျ သူရုံးအောက်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ အကြောင်း၊ ဘယ် Lobby မှာ ရပ်ရမလဲမေးတော့ မဆွိတီတို့ ရုံးဘေးပေါက် Lobby D ရဲ့အပြင်ဖက် သစ်ပင်ရိပ်မှာ ရပ်ခိုင်းထားလိုက်တယ်။ ငါ့ကားက ရုံးအောက်က Parking ထဲမှာ ရပ်ထားတယ်။ လာကြည့်မှာလားဆိုတော့ သူ့နေရာကို မောင်းလာခဲ့ပါဆိုတာနဲ့ မဆွိတီလည်း ကားလေးကိုမောင်းပြီး Lobby D နားမောင်းလာတယ်။ သူမောင်းကြည့်ရင်ကြည့်ရအောင်ဆို သော့တမ်းလန်းနဲ့ စက်တောင် သတ်မထားဘူး၊ သူ့ရှေ့တင်ရပ်ပြီး ကားထဲက ထွက်ပြီး နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။
သူက ကားထဲက အထွက်မှာတင် ကားကို မြင်မြင်ချင်း ဘာပြောတုန်းဆိုတော့ " ငါနင့်ကားကို ကြိုက်တယ် ... ခုပဲ ၀ယ်မယ် ..." တဲ့ဆိုပြီး မဆွိတီရဲ့ ကားခေါင်းပေါ်မှာပဲ အဆင်သင့်ယူလာတဲ့ form ကို ထုတ်ဖြည့်နေတယ်။ ပြီးမှ သူ့နာမည် Mr. Gam တဲ့ဆို မိတ်ဆက်လာတယ်။ လူပုံက အသက် ၄၅-၅၀လောက် typical စလုံးရုပ်မျိုး၊ စကားပြောတာကလဲ ခက်ဆတ်ဆတ်၊ ခက်မြန်မြန်၊ လူကလဲ ခက်သွက်သွက်၊ ခပ်လောလော ပုံစံမျိုးပါ။ နောက်ပိုင်း စကားပြောကြည့်တော့ ရိုးသားတဲ့ အရိပ်အရောင်လေးတွေတော့ တွေ့ရပါတယ်။
ကားစက်ဖွင့်ထားတယ် စစ်ကြည့်ပါဦးဆိုတာကို စိတ်မ၀င်စားဘူး ဖောင်ကိုသာ ဖြည့်နေတယ်။ မဆွိတီလဲ ကားကို စက်သတ်လိုက်ပြီး သော့ကို ဖြုတ်လိုက်တယ်။ အတော်ကြာမှ မစ်စတာ ဂမ်းက ကားနောက်ပိုင်းကိုဖွင့် လှန်လျှောကြည့်ပြီး ဖောင်ကို ဆက်ဖြည့်ပြန်တယ်။ ဖောင်ဖြည့်နေတုံး ဦးခြိ်မ့်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အချက်အလက်တွေ တောင်းတော့ ကိုယ်က ယူမလာမိတာနဲ့ ရုံးပေါ်တက် print out ထုတ်ပြီး ပြန်ယူ နေရသေးတယ်။ ပိုင်ရှင်က ဒီမှာမရှိတဲ့အကြောင်းပြောတော့ ကိစ္စမရှိ။ သူ့ အိ်ုင်စီ မူရင်းသာလိုကြောင်း၊ ခုပေးတဲ့ ဖောင် ၂စောင်ကိုလည်း သူ့လက်မှတ် မုရင်းထိုးဖို့ လိုကြောင်း ပြောပြီး ကားအရောင်းအ၀ယ်လုပ်တဲ့ ဘောက်ချာ(စာချုပ်) မှာ ၂ယောက် လက်မှတ်ထိုးကြတယ်။ ပြီးတော့ စရံငွေ ၂၀၀၀ ပေးတဲ့ ချက်လက်မှတ်ကို ပေးတယ်။ LTA က blank ဖောင် ၂စောင်ကို ဘာမှမရေးပါနှင့်၊ မဖြည့်ပါနှင့်၊ သူတို့အားလုံးဖြည့်ပေးပါမယ် လို့လဲ အတန်တန်မှာပါတယ်။ သူတို့က ကုမ္ပဏီနဲ့ လုပ်တာဖြစ်ကြောင်း၊ အားလုံး စနစ်တကျ step by step လုပ်ပေးပါ့မယ်။ ဘာမှ စိတ်ပူဖို့ မလိုကြောင်း ပြောပါတယ်။ မဆွိတီကို ကားဘယ်တော့ အပ်မှာလဲမေးတော့ မဆွိတီ ရုံးတက်ရမဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ နောက် ၃ပတ်နေမှ ဆိုတော့ ကိစ္စမရှိပါ။ အဲဒီကျမှ အရောင်းအ၀ယ် ကိစ္စ ဆက်လုပ်ကြတာပေါ့ဆို ပြန်သွားပါတော့တယ်ခင်ဗျား။
ဒီကြားထဲ မဆွိတီကလဲ ကိုယ့်ဖက်က သေချာအောင် ကားရောင်းတဲ့အခါ တခြား hidden cost တွေရှိပါသေးလားဆိုတော့ မရှိပါ။ ခုပေးတဲ့ဈေးအတိအကျ ဘာမှ မနှုတ်ပဲ ရမည်လို့ပြောသွားပါတယ်။ နောက် သူက LTA က ကားဝယ်တုံးက ထုတ်ပေးတဲ့ ကားနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အချက်အလက်တွေတောင်းတယ်ဗျ။ အဓိကက ကား chassis number ဆိုလားပဲ။ နောက်သူက ကားတိုက်ဖူးလား မေးသေးတယ်။ မဆွိတီကလည်း အမှန်အတိုင်း တိုက်ဖူးတယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ မိုင်နာကေ့စ်ပါပဲ ၊ နောက်က ကားဘန်ပါလေးပဲ ပိန်သွားတာပါဆိုတော့ သူက ကားနောက်ပိုင်းကို ပြန်စစ်ကြည့်တယ်ဗျ။
ဒီနေရာမှာ သဘောပေါက်လိုက်တာက ကားတွေမှာ ကြီးကြီးမားမား တိုက်ဖူးတယ်ဆို ကားဘော်ဒီက Chassis မှာ ရေးထားတဲ့ chassis နံပတ်ပါတဲ့ အပိုင်းကို ဖြတ်ပြီးပြင်ရတယ်ဆို အဲကားဈေးမရတော့ဘူးဗျ။ ကားက အော်ရီဂျင်နယ် chassisc နံပတ်နဲ့ဆို ဒီကားက ကြီးကြီးမားမား မတိုက်ဖူးဘူးလို့ယူဆရတော့ ဈေးပိုရတယ်ပေါ့ဂျာ။ ကားတွေကို owner တွေက မ၀ယ်ခင် ကျွမ်းကျင်သူ work shop က လူတွေ ခေါ်ပြီး Inspection ၀င်တယ်တဲ့။ အဲဒီမှာ အဲဒါတွေ အကုန်စစ်တာ၊ တိ်ုက်ဖူးရင်တော့ အကုန်ပေါ်တာပဲတဲ့။ညာလို့မရဘူးတဲ့ဗျာ။ ကားနောက်ဖုံးကိုဖွင့် လှန်လှောကြည့်တယ်ဆိုတာ နွားများရောင်းရင် သွားဖြဲကြည့်သလိုပဲဆိုတာ ခုမှ အန်တီဆွိတို့ သဘောပေါက်ပါသဗျား။
နောက် သူတို့ အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ်ကိုဖတ်ကြည့်တော့ ကားကို ဘယ်လောက်နဲ့ ရောင်းမယ်။ စရံဘယ်လောက်ပေးထားတယ် ... စ တာတွေ အပြင် ကားအပ်တဲ့အချိန်ကျရင် ကားကို ခုပြထားတဲ့ ပုံစံအတိုင်း မပျက်မယွင်းပဲ အပ်ရမယ်။ မဟုတ်ပါက စပေါ်ပေးထားရဲ့ ၂ဆပြန်လျှော်ရမယ်လို့လဲ ရေးထားသဗျ။
ဒီလိုနဲ့ မဆွိတီလဲ မရဲတရဲ ဘာဝယ်မလဲရှင့် အဲလေ ... မယုံမရဲနဲ့ မစ်စတာဂမ်းကို ပုံအပ်ပြီးသကာလ မစ်စ်တာဂမ်းပေးတဲ့ ကားဝယ်/ရောင်းစာချုပ်က ကုမ္ပဏီလိပ်စာကို စစ်ကြည့်လိုက်တော့ သူတို့ကုမ္ပဏီဟာ ကားတွေကို Show room တွေမှာ ပြပြီးရောင်းတဲ့ ဧရာမ ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ဗျာ ညကျတော့ ဦးခြိ်မ်သူငယ်ချင်းတွေက ဖုံးဆက်မေးလို့ အကျိုးအကြောင်း ပြောပြတော့ သူတို့က စိတ်ပူနေသဗျ။ ကားနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အချက်အလက်တွေ အကုန်မပေးနဲ့ဦး။ သူက အဲဒီကုမ္ပဏီကမှန်း ဘယ်လိုသိမှာလဲ။ တော်ကြာ ညာပြီး ကားကို ကိုယ်မသိပဲ ရောင်းစားလိုက်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတော့ လန့်ဖြန့်ပြီး အဲကုမ္ပဏီကို ဖုန်းဆက်ပြီး မစ်စတာဂမ်းဆိုသူ တကယ်ရှိမရှိ စုံစမ်းလိုက်ရသေးသဗျ။ အမှန်တော့ မစ်စ်တာဂမ်းလိုလူမျိုးကို car dealer ကုမ္ပဏီတွေမှာ purchaser ခေါ်သဗျ။ သူတို့က ခြေမြန်တော်တပ်သားတွေ။ ကားကြော်ငြာတွေ လိုက်ကြည့်၊ ဈေးတန်တာ၊ ဈေးမှန်တာတွေ့ရင် သူများတွေမဦးခင် အမြန်သွားကြည့်၊ ကြိုက်ရင် စရံပေး၊ စာချုပ်ချုပ်။ အဲဒါ သူတို့အလုပ်ဗျ။ ကိုယ်က အဲလိုကြီး ကမန်းကတန်းနဲ့ ပေးဝယ်တော့လဲ လွယ်လွန်းလှပါလား၊ ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လား၊ ညာတာလားဆို လန့်နေတာဗျ။
င်္ဒီလိုနဲ့ အန်တီဆွိလည်း ကားလေးရောင်းပြီး စိတ်ချမ်းသာနေတာပေါ့ဗျာ။ ကားကလဲ နောက်အေးဆေးမှ ပေးရမှာဆိုတော့ နေ့တိုင်း ဟန်မပျက် ရုံးကိုလဲ ကားလေးမောင်းသွားလို့။ အားလုံး အဆင်ပြေ၊ ချောမွေ့ နေပြီ။
ကားစဘော်ပေးခဲ့တဲ့ ချက်လက်မှတ်က ပိုက်ပိုက်လေး ကိုယ့်အကောင့် ထဲ ၀င်လာတဲ့နေ့ပဲ သူနဲ့ကျမှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကိုယ်သုံးနေကျ ကင်မရာလေးက ဘာဖြစ်လဲမသိ၊ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါနဲ့ ကားရောင်းရင် ဖွတ်ကလိဒင်္ဂါံးလေးကလဲ မြိုးမြိုးမြတ်မြတ်ရဦးမှာဆိုတော့ ကင်မရာ အသစ်ဝယ်ဖို့ကို တွန်းပို့နေသလိုပဲဗျ။ ခုသုံးတဲ့ မော်ဒယ်လေးပဲ ဈေးချိုတာလေး ၀ယ်မယ်ဆိုတော့ ဦးခြိ်မ့်က ခုခေတ်မှာ လူတိုင်း DSLR တွေ သုံးနေတာ။ ညည်းလဲ ဘလော့ဂ်တွေ ရေး၊ ပုံတွေတင်နေတာပဲတဲ့ ၊ DSLR ပဲ ၀ယ်လိုက်ပါ ဆို အန်တီသက်ဝေတို့ ပြောပြောနေတဲ့ ၂ကျပ်ခွဲတန်ကြီး ၀ယ်ဖို့ တိုက်တွန်းပါလောရောဂျာ။
ဒီလိုနဲ့ .... မစွမ်းခင်းကလဲရှိ၊ ကန်ဇွန်းခင်းကလဲ ငြိနေတဲ့ (ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် သုံးလိုက်ပြီဂျာ) အန်တီဆွိတို့ နောက်အပတ် စနေနေ့ညမှာပဲ DSLR ကင်မရာလေးဝယ်ဖို့ ကင်မရာ နားလည်တဲ့ ဖိုရမ်က ခလေးအချို့နဲ့ ဖူနန်းကို ရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ကင်မရာဝယ်၊ ပင်နစူးလားက မြနန္ဒာမှာ ထမင်းဝင်စားကြ၊ အာရိုက်ကြပြီး ပြန်တော့ ည ၈နာရီခွဲလောက် ဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျ။ ကားက ဖူနန်း ကားပါ့ကင်မှာ ရပ်ထားတာ။ အရေးထဲ ကားပါ့ကင် အထွက်မှာ ဆော့ဖ်ဝဲ ပြသနာဖြစ်နေလို့ဆိုလား ကိုယ့်ကားတစ်စီးထဲ ထွက်မရဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီထဲက ဒီနေ့တော့ တွတ်ပီတို့ ကံမကောင်းပါလား ဆို ဘေးကပါလာတဲ့ ဖိုရမ်က ညီမလေးကို တောင်ပြောနေသေးတာ။
ပင်နစူးလားမှ အပြန် ... ဒန် ... ဒန် ... ဒန် ...
အပြန်ကျ ဖိုရမ်က ညီမလေးကို အိမ်နားက MRT မှာ အရင် ၀င်ချပြီး မဆွိတီတို့ အိမ်ဖက်ကို ပတ်မောင်းလာခဲ့တယ်။
အချိန်- စနေနေ့ ည၉နာရီ ၁၅ ခန့်
ကားပေါ်ပါလာသူများ- မဆွိတီ၊ ဂျုဂျူး၊ ကြီးတော်
နေရာ - ဂျူရောင်းဖက် မဆွိတီတို့အိမ်နား မရောက်တရောက်
မဆွိတီတို့ အိမ်ကို မောင်းအလာလမ်းမှာ ... ရှေလမ်းကြားတစ်ခုအရောက် လမ်းကြားထဲက တက်စီအပြာရောင်တစ်စီးဟာ အရှိန်နဲ့ အပြင်းမောင်းထွက်လာတာကို ရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရတယ် ဆိုရင်ပဲ ကား၂ခါခွဲမက တိုက်ဖူးတဲ့ မဆွိတီဟာ တိုက်မိမှာကြောက်လွန်းလို့ ရုတ်တရက် ဘရိတ်ကို ဆောင့်နင်းချလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ....
(((ကျွီ .....))) ...
((((ဒုန်းးးးးးးး ....))))) ဆို ... .... .... .... .... ....
Posted by T T Sweet at 8:26 AM
ဖိုးတုတ် May 20, 2011 at 2:14 PM
ဖတ်လို. တကယ့်ကို ကောင်းမှကောင်း ၊ စိတ်ဝင်စားဖို.လည်းကောင်းပါ့
ကိုရီးယား drama ဇတ်လမ်းတွေလို ပရိတ်သတ်တွေက နောင် episode မှာ ဘာဖြစ်မလဲလို. စိတ်ဝင်စားမဲ့ အခန်းမှာ ရပ်လိုက်တယ် ...
MrDBA May 20, 2011 at 2:20 PM
ဂျမ်းဘုံ May 20, 2011 at 3:08 PM
အို.. ၂ ဆ ၂ ဆ.. =(
shin May 21, 2011 at 1:53 PM
AMK May 21, 2011 at 9:32 PM
ကျီ...အမလေး ကုန်ပါပြီ ..မြန်မြန်ဆက်ပါအုံး တီတီဆွိ ရဲ့အပိုင်း ၄
လသာည May 21, 2011 at 9:42 PM
အိုးးးးးးးးးး သွားပါပြီ သွားပါပြီ...
အဲဒါနဲ့.. ဘယ်လိုဖြစ်တာလည်း မြန်မြန်ပြောပါ မဆွိရာ ..
Anonymous May 21, 2011 at 11:21 PM
wei thet May 22, 2011 at 1:43 AM
အမ၇ဲ့ ဒုန်းကို ကျုးပစ်မှာကော ဒီမှာပါလာဖတ်သွားတယ်
khin oo may May 22, 2011 at 1:50 AM
Anonymous May 23, 2011 at 11:35 AM
လုံးဝမတိုက်မိဘူး။ ဘရိတ်အုပ်တာ မြန်လို့ လွတ်သွားတာ။ ဒီလိုပဲ တီတီဆွိက
မယုံရင် ကြည့်နေ။ နောက်အပိုင်းမှာ.. ကံကောင်းလို့ မတိုက်တယ် သံချောင်းတို့ အကြိုက်ကွယ်.. ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
တန်ခူး May 23, 2011 at 3:11 PM
အန်တီဆွိနှင့် ကားရောင်းခြင်းအတွေ့အကြုံ (၄)
အန်တီဆွိနှင့် ကားရောင်းခြင်းအတွေ့အကြုံ (၂)
အော်ဇီမှာ ကြုံရသမျှ (၂)
ကိုကြီးကျောက် အတွက် ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်း ...